Hery Rajaonarimampianina : « Mbola tsy ho tapitra ny fanamby… » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Mbola tsy ho tapitra ny fanamby… »
Noharin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny “ady” ny fampandrosoana izay apetraka eto Madagasikara. Miatrika izany ady izany isika isan’andro , hoy izy, ary tsy maintsy mandresy. “ Toa ny ady ny fampandrosoana ny firenena. Ady amin’ny mpanakorontana. Ady amin’ny asan-dahalo. Tsy hijanona isika raha tsy foana izany tsy fandriam-pahalemana izany. Izaho mihitsy no hitarika an’izany. Tsy avelantsika raha tsy mandresy isika. Fanamby lehibe hapetraka izany. Mbola tsy ho tapitra akory izany fanamby ho an’ny fampandrosoana izany fa mbola hitohy. Tsy afaka ny hamokatra am-pilaminana mihitsy ny tantsaha raha tsy mipetraka izany filaminana izany”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny kabariny tamin’ny fametrahana ny tobin’ireo Kômandô tao Ihosy, ny faran’ny herinandro teo.
Nasiany tsindrim-peo manokana ireo zatra mpanakorontana ka manome tsiny be fahatany ny asa fampandrosoana efa napetraka. Na tsy niteny nivantana aza ny Filoha, dia maro tokoa ireo sokajin’olona tsy manao afa-tsy ny fambolena tsaho sy fampikatsoana ny asam-panjakana tsotra izao. Tsy mahay afa-tsy ny fisehosehoana ivelany ireny sokajin’olona ireny ka ny vava no betsaka noho ny asa hataony. Tsy azo ianteherana ireny sokajin’olona ireny satria dia miandry kendry tohana hambaboana ny fon’ny Malagasy efa lozotry ny fampahantrana natao taminy. “ Be loatra ireo olona mitady hanao izay tiany hatao eto amin’ny firenena. Aoka izay ny fampahantrana ny vahoaka. Mila mametraka tany tan-dalàna isika, ary ny rehetra dia maniry izany. Be loatra izay fampahantrana natao teto izay. Fotoana efa hitsanganantsika izao. Ananantsika ny saina sy ny hevitra entina hanaovana izany. Fotoanany izao. Aza mijery ny hafa ianao, fa raiso ny andraikitrao”, hoy hatrany ny Filoha.
Nampirisika ny rehetra ho sahy hijoro hanohitra ireny sokajin’olona fanetriben’ny firenena ireny ny Filoha. Na adihevitra hampandroso ny firenena aza mantsy, toherin’ireny fanetribe ireny ho any amin’ny tsy izy. “Aoka isika sahy hanohitra ny tsy mety hataon’ireny mpanakorontana ireny. Ho sahy hamaky bantsilana ny tsy mety eto amin’ny firenena”, raha ny toromarika nomen’ny Filoha.
Noraisin’ny filoha ohatra tamin’izany ny adihevitra mikasika ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. Izy, Filoha, tenany no manokatra ny adihevitra fa tsy sanatria ka manery ny rehetra hanaraka ilay hevitra akory. “ Izaho no nanokatra ny adihevitra. Izay mety amintsika no atao. Izay mampisy filaminana no hatao. Sokafy ny adihevitra. Adihevitra izay tsy mijery afa-tsy ny fampandrosoana ny firenena”, araka ny teny natsipin’ny Filoha.
Vaky ny ady amin’ny dahalo ambony latabatra
Notsipihin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny jeneraly Béni Xavier Rakotoniaina kosa fa ny fametrahana ilay Bataillon Inter-armés Malagasy ao Ihosy io dia tsy hanenjika fotsiny ireo dahalo mpangalatra omby, fa koa hamongotra ireo dahalo ambony latabatra. Raha mbola misy foana mantsy ireto dahalo ambony latabatra ireto, dia ho sarotra ny hanafoanana ny asan-dahalo. Saika izany dahalo ambony latabatra izany no mpanome baiko sy mpamatsy fitaovam-piadiana ary mpitady lalam-barotra ho an’ny dahalo. Vonona hampandry fahalemana an’iny faritra Atsimo anjakan’ny asan-dahalo iny ny mpitandro filaminana Malagasy. “ Raha misy an’izany dahalo manana fitaovam-piadiana mahery vaika izany dia aoka hampandre anay fa vonona ny hamongotra an’izany izahay. Matetika mantsy dia ny resaka sy ny tsaho no alefa aloha, entina hanakiviana. Miaramila manao vy very aina ireo napetraka aty ireo ka tsy hitsitsy izany dahalo milaza azy ho manana fitaovana mahery vaika izany. Hisava ny atiala sy zohy fieren’ny dahalo mihitsy izy ireo. Hampiasa angidimby ihany koa hanamorana ny fanenjehana an’ireo dahalo. Mikasika an’izay angidim-by izay, dia efa mandeha amin’izao ny tetikasa mikasika ny hanampiana an’ireo Helikoptera efa eto am-pelatanantsika ireo”, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena.
Tafiditra indrindra amin’ny fanatanterahana ilay politika ahitam-bokatra ho an’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana moa ny fametrahana an’io Toby ho an’ireo Komando hiady amin’ny dahalo io. Napetraka tao Ihosy ilay izy, satria io no toerana statejika sy mora hanatanterahana ny fidirana an-tsehatra amin’ny famongorana ny asan-dahalo any Atsimo. Mifameno amin’ny asan’ny Usad, na ilay vondron-kery manokana miady amin’ny dahalo any Betroka ihany koa ny Bia.